Ciidamada Itoobiya oo Howlgalo ka sameeyay Baladweyne ka dib Qarax Bam lagu weeraray – SBC
Ciidamada Itoobiya oo Howlgalo ka sameeyay Baladweyne ka dib Qarax Bam lagu weeraray
Ciidamada milataarka Itoobiya Aya howlgalo xoogan ka wada Magaalada Baladweyne xarunta gobolka hiiraan ka dib qaraxyo iyo weeraro qorsheysan oo halkaasi looggu geystay.
Waxaa soo laalaabtay Weerarada Bambaano ee loogeysanayo ciidamada Itoobiyaanka ah ee Baladweyne ku sugan tan iyo intii ay halkasi soo gareen, waxayna aheyd dhacdadii ugu dambeysay xalay markii lala eegtay Bam Gacmeed Bar Control oo ku taala Bartamaha magaaladaasi.
Lama sheegin khasaare ka dhashay Bamkaasi lagu weeraray ciidamada Balse waxa uu ka mid noqonayaa mid qeyb ka noqda Weerarada ciidamada Itoobiyaanka ah loo geysto .
Ka dib qaraxaasi waxaa bilowday Howlgalo ay ciidamada Itoobiya iyo kuwa Soomaalida si wada jir ah uga bilaabaan 4ta Xaafadood ee magaalada Baladweyne kaas oo la sheegay in ay dad ku qabqabteen balse aan la xaqiijin inta ay la egyihiin dadka la qabqabtay .
Dadka deegaanka ayaa siweyn cabsi uga muujiyay qaraxyadan ku soo kordhay baladweyne iyagoona sheegay in ay si aad ah uga xun yihiin, waxaanad arki kartaa xiliyada xasar liiqiiya ama fiidadka in ay faarujiyaan dadka wadooyinka magaalada iyo xaafadaha iyagoona u deg dega guryahooda.